Musoro: Pamutsetse wekutengesa muAmazon
ne admin pane 20-11-14
Musoro: Pamutsetse wekutengesa muAmazon Ningbo Yongsheng Brush Co, Ltd. -imwe yekutungamira nyanzvi yebvudzi bhurashi manufactories muChina. Amazon-imwe yevatengesi vepamhepo vepasirose pasirese. Kubva 2018, kambani yedu yaita muchinjikwa-muganho e-commerce kutengesa kweAmazon uye yakashandisa yayo yekutanga.
Musoro: Nyowani nyowani-Bamboo Fiber brashi / Straw Brush
Musoro: Nyowani nyowani-Bamboo Fiber bhurashi / Straw Brush Hapana mapurasitiki, hapana huni, hapana simbi. Ningbo Yongsheng Brush Co, Ltd. yakabudirira kuisa chinhu chitsva - Biomass chinoumba zvinhu. Iyo mhando nyowani yekusagadzikana zvinhu iyo inoumbwa neye macromolecular zvinhu uye biomass materia ...
Musoro: Kusvikira Artificial Intelligence (AI)
Musoro: Kusvika Pakugadzira Intelligence (AI) HONGU, AI iri kusvika! Nekuda kwekunetseka mukutora mushandi, kunyanya kukanganisa kwehosha muna 2020.Ningbo Yongsheng Brush Co, Ltd. yakanga yaedza kwazvo kuvandudza tekinoroji yeAI mukugadzira kwakawanda. Mazuva ano, mazhinji eayo inje ...